समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्य संस्कृति
जनतापाटी डेस्क मंगलवार, बैशाख १०, २०७६, १६:०७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । २०७४ फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियान भन्ने नारा दिँदै पाँच वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रमुख ध्येय मुलुकको समृद्धि भएको बताउँदै आएका छन् । उनले त्यसका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले प्रस्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्य संस्कृति हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा दोस्रोपटक इनिङ गर्दै गर्दा उनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए तर उनको एकवर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचारी कुनै त्रास देखिएनन् । बरु कम्मल ओढेर घिउ खान पल्केकाहरू नै हावी भइरहे । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको अनुभवमा शासकहरूको बोली र व्यवहारमा फरक देखिने विगतकै परम्परा अहिले पनि दोहोरिएको छ ।
बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएको छ । समाजवादको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार सुरुकै दिनदेखि विभिन्न उल्झनमा परेको विश्लेषण कोइरालाको छ । सुशासन देखाउने दातजस्तै हुँदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध आइरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चमत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरलगायत राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।
यतिखेर सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा उनकै सारथी मन्त्री र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसी नै अवरोधकका रूपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो बोलाइ र गराइमा कतिसम्म एकरूपता कायम गर्न सक्लान् ? मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासन उनको बोलाइ र गराइमा आउन सक्ने एकरूपतामा निर्भर रहन्छ ।
सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासनमाथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको अनुभव छ । अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हुन्छ, तल धेरै सफा गरिरहनु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ ।
यही मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, उनका मन्त्रीहरू र उनी मातहत चल्ने प्रशासकले एकीकृत रूपमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि ओलीले भनेजस्तै सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ । तर, मुलुकमा वर्षांैदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायी रूपमा खोल्न प्रधानमन्त्री ओली, उनका सारथी मन्त्रीहरू र ब्युरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ ।
ओलीले आर्थिक समृद्धि र त्यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त बनाइरहँदा उनलाई काँध थापेर अगाडि बढाउने उनका टिमका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार जरुरी रहन्छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अनुभवमा राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतिकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ ।
यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको तीब्र चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारितासाथ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता दाहाल आंैल्याउँछन् । बारम्बार सुशासनको पाठ पढाउँदै आइरहेका ओलीले हालको कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिलाई राम्ररी मनन गर्दै सो प्रवृत्ति हटाउन दीर्घकालीन योजना र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कस्तो छ त हाम्रो कर्मचारी तन्त्र ? चिरफार गर्न जरुरी छ ।
भ्रष्ट संस्कृतिको अन्त जरुरी
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिलेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रशासनका पिताका रूपमा रहेका विड्रो विल्सनले भनेझैं कोमामा पुगेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने यसलाई ‘सञ्जिवनी बुटी’ खुवाएर तंग्राउन नसकिने भने होइन । त्यो सञ्जिवनी बुटी भनेको दण्डहीनताको अन्त हो । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नु हो ।
नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । ओली सरकारलाई सफलतामा पु¥याउन पनि यसले ठीकै भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यो समूहलाई निरन्तर खार्दै र जिम्मेबार बनाउँदै अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
समृद्धिका लागि सबल प्रशासन
ओलीले साँच्चै नै मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्‍याउने हो भने उनी र उनका राजनीतिक सारथीहरू नैतिकवान् त बन्नैपर्छ । यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ ।
अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रशासक तथा कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात्, कानुनको शासन तथा कामकारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासनएवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा गर्ने, व्यवसायिक र सक्षम बनाउन सोहीअनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अनुगमन र विशेष निगरानी
प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले प्रशासन यन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारी उपचर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस्तै उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । यसका लागि ओली सरकारका मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविक रूपमा लाग्नेगरी मन्त्रीहरूलाई पनि सोहीअनुसार हिडाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीलाई पनि शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
आशाका किरण देखिँदै
एक वर्षमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसके पनि आशाका किरण देखिन थालेका छन् । सरकारले महत्वांकाक्षी योजना ल्याउन थालेको छ भने सर्वसाधारणमा अनुभूति हुने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउन थालेको छ । यद्यपि ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका गुनासा पनि त्यति नै आउन थालेका छन् ।
सरकारले ठूलाठूला महत्वांकाक्षी योजनाका साथै जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुन सक्ने कार्यक्रम पनि निरन्तर लागू गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले साना किसानलाई राहत दिने विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ भने रेलमार्गको कार्यसमेत सुचारु गरेको छ । यसैगरी पानीजहाज सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी गृहकार्य थालिसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ भने सडकमार्ग निर्माणका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ । यस्तै आवास कार्यक्रम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तुइन विस्थापन, राजस्व वृद्धि, एयर एम्बुलेन्स सेवाजस्ता कार्यसमेत सञ्चालन गर्न सरकार सफल भइरहेको देखिन्छ ।
अब नयाँ वर्ष २०७६ सँगै सरकारले जनताको मनमनमा भिज्ने गरी जनताको आयस्तर उकासिने खालका महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ती कार्यक्रम ल्याउने क्रममा त्यसको शसक्त कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र पनि निर्माण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेकादेखि सबै नागरिक स्तरसम्मलाई नै समेट्ने गरी सदाचारका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत ल्याउन सक्नुपर्छ ।
आर्चरीको विशेष तयारी जापानमा, महिलातर्फ स्वर्णको अपेक्षा बुधवार, श्रावण २२, २०७६, १८:४४:००